ဇွန်လ ရဲ့  မိုးရေစက်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဇွန်လ ရဲ့  မိုးရေစက်များ
ကိုနေ၀န်းနီ၊ ကမ်းကြီး၊ ကိုရင်စည်သူ၊ ကိုအလင်းဆက် နဲ့ မော်ဒန်ကဗျာချစ်သူတွေအတွက် အမှတ်တရပေါ့…။
ကိုရွေး ရဲ့ ငါတို့ သွက်သွက် လျှောက်မှ ဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကိုလည်း ခံစားကြည့်ကြပါဦးဗျာ။
ငါတို့ သွက်သွက် လျှောက်မှ ဖြစ်မယ်…
၀င်းကိုကို – ကဲပါကွာ… ထားလိုက်ပါတော့။ ဒီသီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တချို့က ပြောကြတယ်။ ကလေးအဆိုကျော်ရဲ့ ကလေးကြိုက်သီချင်းတဲ့။ မောင်မောင်ဈာန်တို့လည်း ကြားမိမှာပေါ့။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ အနုပညာ ရသ မရှိဘူးလို့ ပြောကြတာပေါ့ကွာ။
မောင်မောင်ဈာန် – သီချင်းရေးတဲ့သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော့်အမြင် ပြောရရင် သီချင်းတစ်ပုဒ်ဟာ ပရိသတ်အတွက် တင်ပြမှုအပိုင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေမှုအပိုင်းရယ်လို့ နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ ဒီသီချင်းက ဖျော်ဖြေမှုအပိုင်းမှာ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ မိုးသီချင်းကို ကြားလိုက်ရလို့ ပရိသတ်ရင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်မှုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လွမ်းစရာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပေးနိုင်စွမ်းရှိမယ်ဆိုရင် ရေးဖွဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရေးဖွဲ့ရကျိုးနပ်ပါတယ် လို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် အစ်ကို
အပူပင် ကင်းမဲ့မှုတွေ နဲ့ ပြန်ကြည့်ရင် လွမ်းစရာအဖြစ်နဲ့ ထာဝရရှိနေကြမှာပါ။ ပျော်စရာတွေ့ရင်၊ ၀မ်းနည်းစရာတွေ့ရင် အမေအဖေ ကို တမ်းတ အော်မြည်တတ်တဲ့ မြန်မာကလေးတွေရဲ့ ချစ်စရာဟန်ပန်လေးဟာ မိုးရွာရင် မိုးရေချိုးမယ်၊ မေမေလာရင် နို့စို့မယ်၊ ဖေဖေလာရင် အုန်းသီးခွဲစားမယ် ဆိုတဲ့ ကလေးသီချင်းလေးမှာ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
၀င်းကိုကို – ဆက်ပါဦး
နောက်ပြီး ဒီသီချင်းကကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းရေးတာ မဟုတ်ဘူး။ R ခိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးရေးတဲ့သီချင်း လေ”
“ ဒီသီချင်း ကိုကြိုက်နေတော့ ထပ်ထည့်ချင်တာနဲ့ အသံသွင်းဖို့ စတူဒီယိုသွားခါနီးမှာ R ခိုင်ကို ကော်ပီလေးပြပြီး
ယူတတ်ရင် အကျိုးရှိမယ့်ပို့စ်လေးပါဗျာ။ ကျေးကျေးပါ မှော်ဆရာရေ။
နောက်ထပ် ထူးခြားမှုတစ်ခုက ဆရာမ၀င့်ပြုံးမြင့် ဘာသာပြန်တဲ့ တိမ်ယံသစ္စာ
၀တ္ထုကို ကိုအလင်းဆက် က အခန်းဆက်ပို့စ်အဖြစ် တင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာမ ၀င့်ပြုံးမြင့်က မန်းဂဇက်ကို နာမည်လေးတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။
” မန်းဂေဇက် ” ဆိုတဲ့ တိမ်ယံထက်က ကွန်ယက်ရွာ
နောက်ပို့စ်တွေလည်း သိတ်ရက်မခြားပဲ တင်လျှင် ပို၍ အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်းပါဗျာ။
စိတ်ပျက်စရာ တောင်ကုတ် အရေးအခင်းအပြီးမှာ တက်လာခဲ့တဲ့
ကွန်းမန့်ပိုင်ရှင် ဗိုက်ကလေးနဲ့ အေးဝတီကြီးတို့ရဲ့ အပြန်အလှန်ကွန်းမန့်လေးတွေကိုလည်း အမှတ်တရ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ကွန်းမန့်လေး တစ်ခုက တကယ် တင်းမာနေတဲ့ကြားက ပျော့ပျောင်းသွားစေခဲ့တာလေး ကို ပြောချင်လို့ပါ။ ကျေးဇူးပါဗျာ။
ရခိုင်ဒေသက ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကူညီကြဖို့ ဆိုပြီး အဘ FR ကြီးက ကျပ် ငါးသိန်းမတည်ပြီး မန်းဂဇက်အနေနဲ့ လှူကြဖို့ နှိုးဆော်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းကြ၀န်းကြရပြန်ပါတယ်။ အလှူအတွက် ခေါင်းစဉ်တတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖက်တီးကက် က လူသားချင်းစာနာကြရာဝယ် ဆိုတဲ့ ပို့စ်တင်ပြီး သူ့ရဲ့ လူသားချင်းစာနာစိတ်ကို လှစ်ဟပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရွှေတိုက်စိုးနဲ့ ဖက်တီးကက် တို့ ကွန်းမန့်တွေအပြန်အလှန်ပစ်ကြပြီး တင်းမာခဲ့ကြပါတယ်။ အားလုံးက စိတ်ပူနေတာကို သိတဲ့ ကျွန်တော်က ဂရန်းမီးရထားဟော်တယ်ထဲမှာ ကော်ဖီသောက်နေရင်း ဓါတ်ပုံတစ်ပုံ ဆင်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ချက်ခြင်း စိတ်အယားပြေ ပိုစ်မဟာကြီး ပို့စ် တင်လိုက်ပြီး ရွာသူားတွေရဲ့ စိတ်ပူနေတာတွေကို ငြိမ်းအေးစေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒါလေးကလည်း အမှတ်တရပါ။
ဇွန်လထဲမှာပဲ ကိုထွန်းဝင်းလတ်တို့ One Candle စေတနာရှင်လူငယ်များအဖွဲ့ရဲ့ ပညာရေးအလှူပို့စ်တွေကိုလည်း ဖတ်ခဲ့ရပြီး ကျွန်တော်တို့လည်း အဲဒီအလှူမှာ ပါချင်တာကြောင့် ညီငယ် အမတ်မင်း၊ ဖက်တီးကက် တို့ အဖွဲ့နဲ့ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ပါဝင်ကြမလဲ ဆိုတာလေး တိုင်ပင်နေကြပါပြီ ကိုထွန်းဝင်းလတ်ရေ။ သာဓု ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။
ရွှေတိုက်စိုး ကလည်း ဖက်တီးကက် ရဲ့ ဇွန်လအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်တွေအတွက် ထောက်ခံပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ လက်မ ၃၀၀ ကျော်ရခဲ့တဲ့ FR ကြီးရဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပို့စ်ကို ထည့်စဉ်းစားစရာရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က လူငယ်တွေကို ဦးစားပေးမှာမို့ ဖက်တီးကက်ကို ရွေးချယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားလူတွေကို တိုင်ပင်တယ် ဆိုပေမယ့် ဒီလတော့ ကျွန်တော့် အကြိုက်လို့ ပဲ ခေါင်းစဉ်တတ်ပါရစေ။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ရွာသူားတွေကို အကြံပြုချင်တာက လစဉ် အကောင်းဆုံးပို့စ်နဲ့ အကောင်းဆုံးကွန်းမန့် ကိုရွေးချယ်ပြီး
ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေ တွေးမနေပါနဲ့ ကျောင်းဒကာတို့ရယ်။
ဒီဇွန်လထဲမှာ ဖတ်မိတာလေးတွေထဲက ခန့်ခန့်ညားညား ရှိမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေ ရွေးထုတ်ပြီး တင်ပြပေးသွားမှာပါ။
အတွေ့အကြုံနုသော်လည်း သဘောထားတော့ ရင့်ဖို့လို (Street View)
ဆာင်းပါးရှင်ပေးချင်တဲ့ massage ကို ကျွန်တော်ရလိုက်တယ်လို့လည်း ထင်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဒဏ်မခံနိုင်ကြသူများမှာ အတိတ်က ရွှေထီးဆောင်းခဲ့သည်ကို မကြာခဏအိပ်မက်မက်နေသူအချို့ဖြစ်သည်။
လှူတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဦးခင်ညွန့်က
ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ ပြည်သူတွေလေ ပြည်သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေတယ်။
ပြည်သူပြည်သားအားလုံး ဒီမိုကရေစီဒဏ် ခံနိုင်ကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါစေ…။
၀က်စ် မင်စတာ နန်းတော်ကြီးထဲက သမိုင်းဝင် နေ့စွဲများနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဒီလိုနေရာမှာ မြန်မာပြည်က မိန်းမတစ်ယောက် မိန့်ခွန်းတက်ပြောခွင့်ရဖို့ဆိုတာ သိတ်တော့ လွယ်လှတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခု
ဒါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် အင်မတန် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်ပါဗျာ။
ဒီမှာတင် ထူးအိမ်သင်က ဒွေးကို
ကိုသားကြီး ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် သီချင်းဆိုနည်းသင်ပေးမယ်။
အခု ကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် ဒွေး ဟာ လူ့ဘ၀ကို လူဝင်စားအဖြစ်နဲ့ ပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအတွက် ဒွေးရဲ့ဇနီး မိုးမိုးရဲ့ အမြင်အတွေးလေးဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
မေး – ကိုသားကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုကြားတဲ့ သတင်းကို မမိုးအနေနဲ့ ဘယ်လို ယူဆပါသလဲ…။
ဖြေ – ယုံတယ်၊ မယုံဘူး ဆိုတာထက် ဟုတ်တယ်ဆိုတာတောင် မမိုးတို့နဲ့သူက ဘာမှ မဆိုင်တော့ဘူးလေ။ ကိုယ့်ယောက်ျားမှမဟုတ်တော့တာ။
မေး – မှန်တာပေါ့။ မမိုးအနေနဲ့ ဘယ်လို စိတ်သဘောထားရှိသလဲ ဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။
အခု နန်းစုလေး ပြောပြတဲ့ ကားပုံပြင်လေး နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဗျာ…။ ပထမဆုံး နန်းစုစီးခဲ့တဲ့ ကားတွေအကြောင်းနည်းနည်းတော့ အင်ထရိုဝင်ပေးထားမယ်ဗျာ။
နန်းစုရတီစိုးက ပထမ မာစီဒီးကား စီးနေရင်းက ၂၀၀၇ မော်ဒယ် အာဖတ်ကားကို လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ်ခန့်က ပြောင်းလဲ စီးခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အရောင်းအ၀ယ်မလုပ်တော့ပဲ ကိုယ်တိုင်ပဲ စီးနေပါတော့တယ် တဲ့။
ဖတ်ရင်းနဲ့ သောက်မြင်တောင်ကတ်လာတယ်။ မာစီဒီးတွေရော သိန်း ၉၅၀ တွေရော၊ သိန်း ၅၀၀ ရှုံးနေတာတွေရော
ကျွန်မတင်ပါးက အသက်(၂၀) တုန်းကထက် အခုပိုပြီး တင်းရင်းကျစ်လျစ်ပါတယ်။
ဒါမျိုးမှ တကယ့် သတင်းဆန်းဗျ…။
ဇွန်လအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပခရီးစဉ်ပုံရိပ်များက ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးများကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ကို လက်ခံရယူတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဓါတ်ပုံဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို သိမ်းကျုံးဖမ်းစားလိုက်နိုင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျက်သရေရှိလိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံ။ ဒီဓါတ်ပုံဟာ သမိုင်းဝင်ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့…။
@ အရီး Khin Latt ;
“မောင်ဂီ ကတော့ မိုးသံ ကြား ရင် သားရေကျ နေပြီ။ ဘီယာ ကြောင့်လို့ တော့ ပြောတာဘဲ။”
ပုံနှိပ်သတင်းစာက.. ၂လတခါဖြစ်နေတော့.. ဇူလိုင်ကိုရေးတဲ့စာပဲထည့်လို့ရမယ်ဖြစ်နေသဗျ..
အင်း ရှင်းသလားမေးရင် မရှင်းဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ် တဂျီးနဲ့ ကိုဘလက်ချောရေ။ သူများတွေ တံဆိပ်ကပ်လို့ မိုးပြာဖြစ်ဖူး မွတ်ဆလင်ဖြစ်ဘူးတာလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့် အလိုလိုနေရင်း တံဆိပ်ရခဲ့တာလား ဆိုတာကိုပေါ့။ မထင်ပါနဲ့။ အချိန်မရွေး မေးနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ လူမှုရေးအရ မသင့်သေးလို့ပါ။ နောက်တွေ့ကြတာပေါ့။
အမြဲတမ်းကတော့ ချိုပေါ့ကျ တစ်ခွက်ထဲသောက်နေကြဗျ….
ဒီနေ့မှပဲ ဖတ်မိတယ် … ဖတ်ရတာ အားရပါးရ ရှိပါတယ် ..
ဘဘ ဘလက်ရေ အတွေ့နောက်ကျလို့ ဆောရီးပါရှင့် ..
ကျေးဇူးပါ.. အားနာပေမယ့် မကြာမကြာရေးပါဦးလို့
ပြောလို့မှ မဆုံးသေး ဒုတိယပိုင်း ထွက်လာပါပကောလား ဘဘဘလက်ရေ…
ဖတ်ရတာများလွန်းလို့ ကော်ပီပဲယူသွားပါတယ် ဘဘဘလက်ရေ … နောက်မှ စိတ်အေးလက်အေးဖတ်ပစ်မယ် …
ဘာ ဘဘ ဘလက် တုန်း ..
@ ငပွကြီး ;
ကိုဘလက်ရေ လက်မထောင်အားပေးပါတယ် ။
ကိုဘလက်ကိုမေးပါရစေ.. ရသ စုံအောင်
“ ဇူလိူင်လ ရဲ့  မိုးရေစက်များ ” ကို အားပေးဖို့စောင့်နေပါတယ်။
ကောင်းပါတယ် ကို Black ရေ…အရမ်းသဘောကျပါတယ်…
၆ခါမြောက် ၀င်ရောက် ဖတ်ရှုပါတယ်ဗျာ
ဦး…..ဟုတ်ပါဘူး ကိုဘလက်ရေ…စုံတာနဲ့စိ…မုံလာနဲ့ငပိ ဆိုသလို သတင်းအစုံ၊ ကဏ္ဍအစုံမို့ တနေရာထဲမှာအကုန်ရနိုင်တဲ့ shopping mall ကြီးထဲရောက်သွားသလိုပါပဲ။ Jul ရဲ့ မိုးရေစက်များကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျို့။
စိမ်းလို့မရတာ ကောင်းတာပေါ့ ဒေါ်မိုးစက်ရယ်…။
မွန်းအောင်ဆိုခဲ့တဲ့ အမေ့အိမ်ဆိုတဲ့သီချင်းကို ကိုငှက်ပြန်ဆိုတဲ့အသံကြားတိုင်း
အမြင့်ဆုံးသို့ အဆင့်ဆင့် တက်လှမ်းနိူင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကိုကြောင်ဝရေ
ကောင်းလွန်းပါတယ် ဗျာ။ ဖတ်ရတာတောင် မောသွားတယ်၊ စုံလွန်းလှချည်လား ဗျာ၊အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ၊
ကွန်းမန့်ပေးသူများလွန်းလို့ မှတ်ချက်ရေးတဲ့နေရာလေးတောင် မနည်းရှာယူရဒယ်။ ဇူလိုင်လစာကို ပုံနှိပ်သဒင်းစာထဲထည့်ပေးမယ်ဆိုဒေါ့ သဂျီးအကြောင်းလေးဗာလေး အများသိအောင် လုပ်ပါအုံး….
စဖတ်ပြီးတော့ပြီးအောင်ဖတ်ချင်ရော .အနော်ကတော့ နန်းစုက ခင် ကြီး ကျယ် ဆိုတော့ ချမ်းမီမီကိုလေးပဲ နှိုက်မြည်းသွားလိုက်တော့မယ် အဟီးး)